IZenzo 20 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
20 Ke kaloku emva kokudamba kwesaqunge eso, uPawulos wathumela ukuba beze abafundi, yaye akuba ebakhuthazile wacela indlela,+ wanduluka waya eMakedoni.+ 2 Emva kokutyhutyha ezo nxalenye nokukhuthaza abo babelapho ngamazwi amaninzi,+ weza eGrisi. 3 Yaye xa wayechithe iinyanga ezintathu apho, ngenxa yokuba kwakuyilwa iyelenqe+ ngokunxamnye naye ngamaYuda njengoko wayesele eza kunduluka ngesikhephe esiya eSiriya, wagqiba kwelokuba abuye adlule eMakedoni. 4 Wayephelekwa nguSopatro+ unyana kaPayiro waseBhereya, uAristarko+ noSekundo abangabaseTesalonika, noGayo waseDerbhe, noTimoti,+ yaye abesithili saseAsiya yayinguTikiko+ noTrofimo.+ 5 Aba bahamba, basilinda eTrowa;+ 6 kodwa sahamba ngolwandle sisuka eFilipi emva kwemihla yamaqebengwana angenagwele,+ saza saya kubo eTrowa+ kwiintsuku ezintlanu; yaye apho sachitha iintsuku ezisixhenxe. 7 Ngosuku lokuqala+ lweveki, xa sasihlanganisene ndawonye ukuze sifumane isidlo, uPawulos wathetha kubo, njengoko wayeza kumka ngemini elandelayo; yaye wayolula intetho yakhe de kwasezinzulwini zobusuku. 8 Ngoko kwakukho izibane eziliqela kwigumbi eliphezulu+ apho sasihlanganisene khona. 9 Ehleli efestileni, umfana othile ogama linguYutiko wafikelwa bubuthongo obunzulu ngoxa uPawulos wayeqhubeka ethetha, yaye, elele yoyi, wawa ukusuka kumgangatho wesithathu waza wacholwa efile. 10 Kodwa uPawulos wehla, waziphosa kuye+ waza wamwola, wathi: “Musani ukuvusa ingxokozelo, kuba umphefumlo wakhe ukuye.”+ 11 Wenyuka ke wayokudla, wancokola kangangethuba elide, de kwathi qheke ukusa, waza ke wemka. 12 Ngoko bemka nayo inkwenkwe iphila yaye bathuthuzeleka ngaphaya komlinganiselo. 13 Ke kaloku sahamba phambili ukuya esikhepheni saza sanduluka sisiya eAsos, apho sasizimisele ukukhwelisa khona uPawulos, kuba, emva kokunikela uyalelo ngokusingisele koku, yena ngokwakhe wayezimisele ukuhamba ngeenyawo. 14 Ngoko akusifumana eAsos, samkhwelisa saza saya eMitilene; 15 yaye, sinduluka ngesikhephe ukusuka apho ngemini elandelayo, safika malunga neKhiyo, kodwa ngemini elandelayo sagaleleka eSamos, kwaye ngemini elandelayo safika eMileto. 16 Kuba uPawulos wayegqibe kwelokuba kudlulwe e-Efese,+ ukuze angachithi naliphi na ixesha kwisithili saseAsiya; kuba wayengxamele ukufika eYerusalem+ ngomhla womthendeleko wePentekoste ukuba wayenako. 17 Noko ke, eseMileto wathumela e-Efese ukuba kubizwe amadoda amakhulu+ ebandla. 18 Akufika wathi kuwo: “Niyazi kakuhle ukuba ukususela kwimini yokuqala endangena ngayo kwisithili saseAsiya+ ndaba kunye nani ixesha liphela,+ 19 ndilikhoboka+ leNkosi ngokona kuthobeka kwengqondo+ kukhulu neenyembezi nezilingo ezandihlelayo ngamayelenqe+ amaYuda; 20 ngoxa ndingazange ndinifihlele nto, ndanixelela zonke izinto eziyingenelo, ndanifundisa+ esidlangalaleni nakwizindlu+ ngezindlu. 21 Kodwa ndanikela ubungqina+ ngokucokisekileyo kumaYuda nakumaGrike ngenguquko+ kuThixo nokholo kwiNkosi yethu uYesu. 22 Yaye ngoku, khangelani! ndibotshiwe emoyeni,+ ndiyahamba ndiya eYerusalem, nangona ndingazazi izinto eziya kwenzeka kum apho, 23 ngaphandle kokuba kwizixeko ngezixeko umoya oyingcwele+ ngokuphindaphindiweyo unikela ubungqina kum njengoko usithi ndilindwe yimixokelelwane neembandezelo.+ 24 Noko ke, andiwugqali njengothandekayo+ kum umphefumlo wam, ukuba nje kuphela ndinokuligqiba ikhondo lam+ nobulungiseleli+ endabamkelayo+ beNkosi uYesu, ukunikela ubungqina obucokisekileyo kwiindaba ezilungileyo zobubele obungasifanelanga bukaThixo.+ 25 “Yaye ngoku, khangelani! ndiyazi ukuba nina nonke ndahambayo phakathi kwenu ndishumayela ubukumkani anisayi kuba sabubona ubuso bam. 26 Ngenxa yoko ndinibizela ukungqina kanye ngalo mhla ukuba ndimsulwa egazini+ labantu bonke, 27 kuba andinifihlelanga nto, ndinixelele lonke icebo+ likaThixo. 28 Zilumkeleni+ nina+ nawo wonke umhlambi,+ ekuthe phakathi kwawo umoya oyingcwele wanimisela nangabaveleli,+ ukuba nilaluse ibandla likaThixo,+ elo walithenga ngegazi+ lowakhe uNyana. 29 Ndiyazi ukuba emva kokumka kwam kuya kungena iingcuka ezicinezelayo+ phakathi kwenu yaye aziyi kuwuphatha ngemfesane umhlambi, 30 kwaye phakathi kwenu kuya kusuka amadoda aze athethe izinto ezijijekileyo+ ukuze abatsale abafundi emva kwawo.+ 31 “Ngoko ke hlalani niphaphile, nize nikhumbule ukuba kangangeminyaka emithathu,+ ubusuku nemini, andizange ndiyeke ukululeka+ ngabanye ndineenyembezi. 32 Yaye ngoku ndininikela kuThixo+ nakwilizwi lobubele obungasifanelanga bakhe, lizwi elo linokunakha+ lize lininike ilifa phakathi kwabo bonke abo bangcwalisiweyo.+ 33 Akukho mntu ndikhanuke silivere okanye golide okanye sivatho sakhe.+ 34 Nani ngokwenu niyazi ukuba ezi zandla ziye zazinyamekela iimfuno zam+ nezabo babekunye nam. 35 Ndinibonisile ezintweni zonke ukuba nimele nisebenze+ ukuze nincede abo babuthathaka,+ yaye nimele niwakhumbule amazwi eNkosi uYesu, xa yona ngokwayo yathi, ‘Kunoyolo ngakumbi ukupha+ kunokwamkela.’” 36 Waza akuba ezitshilo ezi zinto, waguqa+ phantsi kunye nabo bonke waza wathandaza. 37 Eneneni, balila kakhulu bonke, yaye bawela entanyeni kaPawulos+ baza bamanga,+ 38 ngenxa yokuba babenziwe buhlungu ngokukodwa lilizwi awayelithethile lokuthi babengasayi kububona ubuso bakhe.+ Ngoko bamkhapha+ esiya esikhepheni.